Mwari chete ndivo vanganditonga? — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Ndinofarira kukurukura kwaMwari muupenyu hwedu, kunyange kana munhu akasabvumirana neni nezvazvo. Kukurukurirana kunogona kuwana chaicho kuoma chaiyo nokukurumidza zvazvo-kunyanya kana tiri kutaura pamusoro nharo nyaya. Zviri kumbobvira Zvinonakidza kutaurira mumwe munhu kuti unofunga vari zvakaipa. Saka ndinoedza kungwarira namashoko angu, uye kungoti kunongedzera zvinotaurwa naMwari, pane yangu nepfungwa. Kufanana clockwork, Zvisinei, pane imwe nguva pavaikurukura, vachada Mumuvhomorerewo kwehwamanda kadhi: "Asi haasi Bhaibheri hariti kutonga? Imi nyore akapembera pamusoro kuti ndima, hu?"It harumboperi.
In Matthew 7 Jesu anoti, "Regai kutonga, kana newewo urege kutongwa. "Kunyange vaya kumbobvira kuverenga Bhaibheri rinogona kutaura chikamu ichi rake mharidzo shoko neshoko. Izvi zvingava zvikuru yaizivikanwa ndima yeBhaibheri muzuva redu. Uye ingava zvikuru kunzwisiswa
Kusanzwisisana ndima iyi zvinoreva tikasanzwisisa sei isu vanotofanira kudanana. Saka zvinokosha kuti isu kubvunza mubvunzo: Jesu anorevei kana anotiudza kusatonga?
Last vhiki, Ini nomudzimai wangu takapinda wokuroorana wekishopu chechi yedu. Pataifamba kuburikidza zvichimomotera pose pose taroorana, taifanira kukurukura zvakanaka, yakaipa, uye mhou. Taive zvakawanda mukana kurudziranai, asi isu Aivawo mikana kuratidza zvikanganiso. Pataikurukura, mudzimai wangu akandibatsira kuona ndepapi ndiri kuwa pfupi, apo Handisi kuva sezvo kworudo sezvo ndive. kwete ini Akapomerwa kuteerera murayiro waJesu kuzotonga? Handifunge kudaro.
Jesu hakurevi kuti zvakaipa kuita chero tsika nokutonga. Papera mavhesi mashomanana, Jesu anoudza vateereri vake kuti zvandakatonga pamusoro ndiani ivo kugovana chokwadi. Uye mundima 15 yechitsauko ichocho, Jesu anovadzidzisa kuti vatonge avo vanozviti vaprofita, kuona kana ivo zvechokwadi kutaura kuna Mwari kana vari mhumhi matehwe emakwai. Tisingazotauri vakawanda dzimwe ndima muMagwaro kuti achitirayira kuti kunosiyana marudzi yetsika nokutonga. Jesu hazvirevi kutaura mutongo zvose zvakaipa. Uye kana tiri tizviongorore, hatirevi kuti kana.
Vanhu vakawanda vanoomerera kuti unofanira kutonga munhu, asi havana havadaviri chaizvo kuti. Havafungi kuti zvakaipa kuzodana cops pamusoro vatengesi vezvinodhaka vachitengesa dope pamberi peimba yavo. Ivo zvirokwazvo musafunga kuti kururama kudzima TV kana muparidzi kuti vanokara atanga achipemha mari yavo. Zvadaro pane ndyaringo. Kana modaidza munhu kunze kutonga, muri chaizvoizvo kugadzira mutongo tsika pamusoro iyeye. Mune mumwe nomumwe Muzviitiko izvi, Kutonga vari kuitwa pamusoro zvinoitwa nevamwe.
asi, kana mutongo anorova kwese pedyo kumba, zviri vanonzi chakaipa. Ndivanaani vari isu kuita zvandakatonga pamusoro pevamwe? Ngatifungei pamusoro naJesu hazvirevi apo anotiudza kwete mutongi.
Tinoshandisa shoko mutongi yakawanda dzakasiyana. Tinogona kutaura pamusoro muchitonga tarenda anoratidza kana muchitonga nyaya mudare. Rinogona kureva zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Saizvozvowo, shoko rechiGiriki anoshandisa Jesu "mutongi" haangorevi kureva zvimwechete. Saka tinofanira kutarisa vamwe nendima iyi uye vakasara Bhaibheri kana tichida kunzwisisa zvaaireva.
Sezvaunoramba mberi kuverenga ndima, zvinova pachena kuti Jesu ari kurwisa chaiwo mhando mutongo. Iye anoshandisa hilarious mufananidzo munhu anoona rubanzu pamusoro sawdust muziso munhu, asi anofuratira chokwadi chokuti iye ane yakakura danda rake. Ndizvo akafanana kupfeka murume pokutsoropodza gomba majini ako. Jesu haasi kushora chero mhando mutongo; Ari achishora vaizviruramisa, unyengeri nokutonga.
mundima 5 anoti, "Iwe munyepedzeri, tanga kutora danda redu riri muziso rako. "Tisati vanoedza kutonga vamwe, tinofanira kutonga pachedu. Vanyengeri abate vanhu nezvinodiwa kuti ivo pachavo kufuratira. Uye apo vaizviruramisa vanhu vane chipo chaicho nokuda Zvairatidza zvaunokanganisa, vari haazivi yavo. Jesu anoti ari dambudziko. Uye anotiudza Mwari vachatitonga vari kudzoka.
Zviri musoro kuti nehasha mhosva vamwe uye kumira pamusoro pavo sokunge hwako akakwana. Mwari ndiye chete mutongi nemaoko akachena. Tose tiri vanhu tsvina, kuvatungamirira imwe mvura.
Unoona iye harimboti, "Tora danda kubva, uye musafunganya pamusoro maziso nevamwe vanhu. "Iye rinobvumirana, "First kutora danda kubva muziso rako, uye ipapo uchanyatsoona mabvisiro kutora rubanzu kubva hama dzako ziso. "Iye kutiudza kuzviongorora, uye zvadaro kubatsira hama kunze.
Zviri rudo kwandiri kuti chimwe chinhu chinokuvadza muupenyu hwako, asi kuifuratira akafanana hazvina ikoko. Sei ndinoda kurega munhu ndinoda kuramba vachirarama kuparadza tsika? Kana Ndinokudai, Ndichaudza kukutaurirai chokwadi kunyange kana zvichirwadza. Asi zvinofanira kubva raMwari mwero, kwete yangu. Uye ndine kuzviita kubva anozvininipisa mamiriro kuti anoona Ndinoda renyasha zvaunoita.
Ndapota regai kuteerera Matthew 7:1. Asi usakanganwa pamusoro Galatians 6:1: "Hama, kana mumwe akabatwa ari muchivi, imwi veMweya vanofanira agomudzosera zvinyoronyoro. "Tinoda mumwe.
MrAveryBrown • Mbudzi 12, 2013 pa 12:46 pm • pindura
anokurudzira. Convicting. funga. Ngativhure tarisa mwoyo, kuedza kudzidza pfungwa iyi, zuva nezuva uye vanorishandisa.
Steve • Mbudzi 13, 2013 pa 4:31 pm • pindura
shoko rakanaka, rwendo. inoshanda Very, anobatsira chikumbiro vaya pakubata kwakadai ezvinhu. Nyasha norugare…
Esteban Paz • Mbudzi 12, 2013 pa 12:57 pm • pindura
Ndiyo tsanangudzo kuti ndima yakanyatsorurama. Mazvita hama ndave kunetseka ichi. Thanks mukoma wangu tichiita zvauri kuita!
Hama Your muna Kristu!
Charles • Mbudzi 12, 2013 pa 1:07 pm • pindura
Sezvo mufundisi wangu akarurama akayambuka uyu vhiki yapfuura zviri yakachena mupfungwa dzangu. Pastor Brian akati “mutongi haasi shoko rakakodzera kana ukaverenga echiGiriki akariverenga akapoteredza.” Akaenderera mberi achiti shanduro nani ingadai “regai mutongo soMutongi” kana sevadzidzi mutongi (Old Style testement). Kuita mutongo uye achipfuura mutongo vari 2 zvinhu zvakasiyana.
MimiRivera • Mbudzi 12, 2013 pa 1:10 pm • pindura
Aint nothin asi chokwadi :) Amen mukoma.
Jared • Mbudzi 12, 2013 pa 1:25 pm • pindura
Izvi zvinonyanya kubatsira muupenyu hwangu iye zvino. Handina achangobva kuva kukurukura ambuya vangu asiri mutendi, uye ndiri kuedza kuratidza rudo rwaMwari wake. Ndichaita kureurura chivi changu kwaari uye kukumbira ruregerero kwake, uye iye uchakanganwira asi iye achava rant sei zvakaipa ndiri pane zvimwe zvinhu. Ndinoziva ndiri zvakaipa nemhaka nechivimbo Ndatova kunzwa kuna Mwari, asi inonditambudza zvishoma nokuti iye haaoni chivi yake. Iye chete Anondiputsira pasi. I kunyemwerera uye munorida. Ndinonzwisisa kuti ndine vanaamwene rudo nemhuri yangu, asi inonditambudza mukati zvishoma apo asingafadzi kubvuma chivi yake uye saizvozvo kukurumidza kubvuma yangu. Izvi ndizvo zvimwe rubatsiro kunyange. Ndatenda
Ezra_of_Israel • Mbudzi 12, 2013 pa 1:31 pm • pindura
nzira Very wakanaka kuisa uye kuongorora magwaro. Mwari vakukomborere. Chii Love? Ndanga kupedza nguva refu ari mubvunzo kuti nyore ...... woah
PastorBenJohnson • Mbudzi 12, 2013 pa 1:34 pm • pindura
Right pane! Kuti aende pamwe ichi, Paul anoti 1 Corinthians 5:12: “Chii mabhizimisi zvichikosha yangu kutonga avo kunze kwechechi? Uri kusatonga avo mukati.”
Ibasa redu sevatendi kubata hama dzedu nehanzvadzi Kristu vazvidavirire. asi, tinofanira tichizviongorora kumarudzi! Great Blog Trip Lee!
harryyeboah • Mbudzi 12, 2013 pa 1:47 pm • pindura
Wow! vakadzidza zvakawanda. Mwari komborera..
EboniRenee • Mbudzi 12, 2013 pa 1:49 pm • pindura
Beautifulluy & achifunga kuisa. Zvataida ichi.
Tony • Mbudzi 12, 2013 pa 2:00 pm • pindura
Thanks Trip, ichi chinhu chinokosha rugwaro kunzwisisa zvakarurama. Ndinokutendai nokuti this post. Makaisa nemashoko chii Ndave kufunga. Ndiri muduku mufundisi, uye ichi ndicho chinhu ive akanga achida kutaura nevadzidzi vangu. Ini ndichava nechokwadi kushandisa this post uye kuwedzera pane pfungwa idzi. Zvakare ndatenda, nokuti zvose zvaunoita uye achaita. Ndinonamata kuti Mwari acharamba akuropafadzei uye mhuri yako.
Wesley • Mbudzi 12, 2013 pa 2:04 pm • pindura
Zvikuru. Ndiri saka ndaneta vanhu [VaKristu vari nechemberi, nevamwe vazhinji] achidzinga ndima iyi panze chakadai trumps zvose. Zvinofanira kushandiswa senzira Budai ________ vakasununguka kadhi. Kwete napaduku chii nomunyori richiti. Thanks nokuti kutsanangura.
heyi • Mbudzi 12, 2013 pa 2:13 pm • pindura
Kudzidzisa Awesome pano. Ndinogara kukomborerwa mapikicha. Ndinotenda Mwari kuti kushandisa nzira yaanoita. Iwe kwete kunzi kuti mumhanzi, asi kune papurupiti.
Mwari ropafadzai nepfambi uye mhuri yenyu!
Sharon C. James • Mbudzi 12, 2013 pa 2:14 pm • pindura
Ndinokutendai zvikuru nokuda kugoverana pfungwa iyi. Ndichava kuudzawo kwako mumhanyi uye munyengetere kuti vazhinji vakaita ichi pomureza wavo, kurinzwisisa chaizvo sezvo Kristu airevesa, uyewo Galatians 6:1. Stay wakakomborerwa.
Christoph • Mbudzi 12, 2013 pa 2:17 pm • pindura
Ndinofarira kutaura shure Jesu John 7:24 – “kutonga aine kutonga kwakarurama.” Kuti disarms ari kuramba uye mupinde mukana wokutsanangura zvaanoreva, sezvamakaitira kwenyu romukova.
Gloglo • Mbudzi 12, 2013 pa 2:18 pm • pindura
Izvi ndizvo zvandakanga kutaura nababa vangu akati chaiyo zvimwechete. Mwari akuropafadzei Ndinovimba kuti munhu wose achange kuverenga ichi
MJ • Mbudzi 12, 2013 pa 2:19 pm • pindura
shoko rakanaka. Ndanzwa kuti hatifaniri mhosva, asi unogona zvakarurama kutonga. Sapamazuva ndinogona kutaura chinhu pamusoro shamwari “shacking kukwira” asi mukuita kudaro, Handisi kuva hahunyengeri nokuti Handisi kuzviita.
Mark King • Mbudzi 12, 2013 pa 2:26 pm • pindura
Thanks nokuti Ichiwedzera pamusoro Trip ichi. Ichi chinhu chakakosha kwazvo nyaya gaba parudzi urwu. Zvikuru kodzero aripo. Ida ndyaringo iwe yakati, wo.
Ndinoona omumwe nomumwe kutongwa sezvo ari dambudziko. zvimiro zvedu yemakwikwi kumunyengera isu kufunga kuti mumwe munhu kutiudza tiri zvakaipa dzimwe tsvina kana nzira kuedza pamusoro pokukwidziridzwa kwayo. Kana tinoona ichi sezvo rudo wevaFiripi, zvinotora pamusoro yakasiyana zvachose hunosanduka.
Chimwe chinhu kuti ndaka… Iwe phrased uyu kunyanya chikamu nenzira aigona kuvhiringidza vanhu. Wataura, ” Jesu haadaro “zvinoreva” kutaura kutonga kwose kwakaipa. Uye kana tiri tizviongorore, isu hatidaro “zvinoreva” kuti kana.
Just nokuda kutsanangurika nokuda, zvichida nani nzira nemutsara uyu kuti “Hatifaniri kuzvidudzira ichi sezvo Jesu akati” mutongo zvose zvakaipa.
A nokukurumidza iverengwe kuburikidza, uye mumwe munhu aende nokuverenga izvi kufunga, “Oh, Jesu haana kureva kuti?” Pandinofamba chokwadi chaizvo Jesu aireva kutaura chaizvo Akati. Zviri LL mukududzira.
Ndinoziva chii imi zvaireva. Just vakabata kuti rokumusoro kana mabhuku mitemo. Ndinovimba nemi kunzwisisa nei ndakati.
Koshesa basa renyu (zvose kana, kwete chete mumhanzi)! Ramba vachikuya mukoma!
ipai • Mbudzi 12, 2013 pa 2:35 pm • pindura
chokwadi Deep kutaurwa uyu munhu.
Mwari ropafadzai ushumiri hwako.
Ndinowanzofunga kuti kana zvakazara tinzwisise mamiriro edu nezvivi, zvino isu kusvika muvakidzani wedu tsitsi uye rudo.
anajcruz • Mbudzi 12, 2013 pa 2:42 pm • pindura
Ndaifarira ichi!! chaizvoizvo insightly, zvinokurudzira, aaaand convicting!!!
chiyeuchidzo chinotyisa zvazvinoreva kudanana!! kuvonga mukoma! Mwari komborera!!
Taurai: Mwari chete ndivo vanganditonga? (By Trip Lee pamusoro BuilttoBrag.com Blog) | Ron "Big Black" Garrett
WayneChristian • Mbudzi 12, 2013 pa 3:59 pm • pindura
Jesu chete akati zviri nani! Pokumubatira uri kufema mhepo yakachena! Ndinokutendai yenyu nesimba! zvakanyorwa zvakanaka nguva dzose! Mwari Speed ​​mukoma wangu!
JosiahCarter • Mbudzi 12, 2013 pa 7:31 pm • pindura
Ehe! Ndinokutendai chaizvo kunyora izvi! Izvi zvave mupfungwa dzangu zvikuru manjemanje, kunyanya pandinoona shoko “mutongi”. Ndiri zvachose kuudzawo ichi!
David • Mbudzi 12, 2013 pa 8:02 pm • pindura
Ndatenda. Mumwe yakanyatsorurama tsanangudzo kuti ndima uye zvazvinoreva kuti ndaona. MuKristu wose anofanira kuzviongorora kuburikidza Gods maziso paaitaura nomumwe.
carlosAviles • Mbudzi 12, 2013 pa 8:50 pm • pindura
chaizvo. Uye ndinoedza otadza. Ini ndinoerekana ndava nguva nenguva uye ndinoziva kutarisa mukati kutanga ndisati kutaura uye kubatsira munhu idzokere pamusoro Mutsvene nzira.
modallas • Mbudzi 13, 2013 pa 1:53 ndiri • pindura
Handina kunetseka zvanzi. Zvino l nokunzwisisa!!!
modallas • Mbudzi 13, 2013 pa 1:54 ndiri • pindura
Handina bhini kutamburira naro. Tendai Mwari l nokunzwisisa
TeriR • Mbudzi 13, 2013 pa 6:44 ndiri • pindura
Ndicho chinangwa chedu shure zvatinotaura inoita kutonga hama dzedu zvinobatsira kana zvinokuvadza. Ndiri kufunga, “Chii chauri kuita zvakaipa! Bhaibheri rinoti ndizvo. Unofanira kuchigadzira…” Kana kuri, “Ndizvo gonna varwadziwe uye ndinoziva kuti Zvakafanana. Ndine hanya nemi uye haudi kuti imi…”
Like Trip akati, mune dzimwe nzvimbo tiri waudzwa zvakajeka kutonga vadzidzisi venhema.
Zviri pachena tinoda ungwaru Mutsvene wokuita zvakatongwa zakarurama, saka tinofanira kuva unobatanidza naye pamberi, munguva, uye pashure!
Imwe pfungwa Trip yakanaka akaita iri, havangagamuchiri tinzwe kunyange kana mwoyo wedu uri panzvimbo chaiyo, kana tiri asina kurarama zvechokwadi pamberi paMwari uye nehama dzedu.
mudiki • Mbudzi 13, 2013 pa 7:40 ndiri • pindura
Ive vanga kunetsana ichi kwechinguva ikozvino. Asi kuverenga nyaya ino akaita ndinzwe 10 nguva nani kupfuura kare. Thanks Trip! Mwari ropafadzai hama.
EJD • Mbudzi 13, 2013 pa 8:10 ndiri • pindura
Excellent nyaya! “By michero yavo, muchavaziva.” Zviri pachena Kristu whats isu kuti achenjerere mune pokuongorora vamwe – zvikuru kukosha, patinenge tichizivisa Gospel, mugove wokutanga ari kutsanangura sei munhu anosiiwa Mwari Mutsvene nokuda chivi (kuti kutonga tsika!) Zvadaro tinozivisa kuti kutenda muna Jesu Kristu (basa rake rokudzikinura pamuchinjikwa uye Empty Tomb) ndiyo mhinduro yomunhu kuparadzana naMwari, Baba! Shoko Gospel zvisakakwana kana
isu siya panze AKARASIKA nzvimbo kwevanhu (Mutemo unotonga isu!) Asi Kristu inopa nyasha kwatiri vatadzi. Sezvo John Newton akanyora, “Ini kamwe AKARASIKA, asi ikozvino ndiri AKAZOWANIKWA!”
Tatenda • Mbudzi 13, 2013 pa 10:57 ndiri • pindura
Amen BRO. Ndinogara Zimbabwe uye kuti ndima iri kunyange nevakawanda pano!!! Ini vhangeri uye Ndakacherechedza kakawanda kupfuura ini hanya kuyeuka kuti vasiri vatendi uye vaKristu vasiri kurarama zvakanaka kushandisa ndima iyi sezvo nhovo pamusoro kururamiswa. It chichirwadza, Chokwadi chinorwadza…
Bruno • Mbudzi 13, 2013 pa 11:48 ndiri • pindura
Darnell • Mbudzi 13, 2013 pa 3:18 pm • pindura
Ini zvizere kubvumirana kuti dudziro pakutonga maererano Matthew 7. Ndaidawo kuwedzera kuti nokutaura kuti isu sevaKristu havafaniri “mutongi” nyika kana avo vasiri muna Kristu, asi isu “mutongi” muviri waKristu kana kereke. Mwari anoti iye pachake “vatongi” nyika kwete isu vana vake. 1 Corinthians 5:12-13
Taurai: Article kubva Trip Lee muchitonga iwe nevamwe « 360vechidiki
Stephen • Mbudzi 13, 2013 pa 5:27 pm • pindura
Kate • Mbudzi 13, 2013 pa 7:06 pm • pindura
Hey ~ ndichiparidza Sunday ichi muchitonga (kana kwete elnaz) uye ndiri kunetseka kana ndinogona kutevedzera / namatidza dzimwe pfungwa dzenyu kupinda mharidzo yangu? Ndatenda! Kate
Clayton • Mbudzi 13, 2013 pa 10:01 pm • pindura
Very chakadzama, Mwari ropafadzai BRO
Taurai: Morning Mashup 11/14 | Theology Zvinhu
Taurai: Weekly Roundup [11/15/13] | Harvard Avenue College / Career Ushumiri
akakundwa • Mbudzi 18, 2013 pa 1:38 pm • pindura
Ndinoonga rudo rwaMwari uye vakakomborerwa mashoko uchenjeri hunobva kuna Mwari kuburikidza imi vakomana… Rudo ruzhinji
Taurai: CHII MUKRISTU TARIRA AKAFANANA? | Kutsvaka Soul muSeoul
Tyler • Mbudzi 26, 2013 pa 1:07 pm • pindura
Ndinokutenda chaizvo nokuda vaiswe ichi. Ndinofunga shoko iri saka zvakakodzera kuti vaKristu inofamba zvose zvoupenyu kunzwa. Tinofanira kutanga kuda mumwe nzira Jesu akatidana kuti zvinoreva kugadzirisa nzvimbo dzinofanira kutariswa tsitsi.
pelumi • Mbudzi 26, 2013 pa 5:56 pm • pindura
ichi akandibatsira zvechokwadi
sezvo nguva dzose
Kathryn • Mbudzi 27, 2013 pa 8:51 pm • pindura
Ndinamatirewo kuti ndichagona mwoyo pachena kuti chokwadi; kuti ndizive uye vasunungurwe; kuti ndichaita kutenda muna Jesu uye nokutendeuka pachivi changu. Kuti ini achawana nyasha dzake. Kuti handinganyadziswi nokusagona pakushaiwa kwangu asi nechivi. Ndatenda.
Elvis • Zvita 4, 2013 pa 11:09 ndiri • pindura
pane zvisinei kugoverana shoko iri….yayo reaaly ziso yokutanga nezvauchangobva akati izvi Blog Trip…Ramba ushumiri (vose)..
Taurai: Trip Lee – Mwari chete ndivo vanganditonga? » Christian Apologetics & Intelligence Ushumiri
Taurai: Trip Lee - Mwari chete ndivo vanganditonga? | Varanda Grace ApologeticsServants Nyasha Apologetics
Michael • Ndira 29, 2014 pa 12:47 pm • pindura
Kana uchinyatsoda pafunge, “Regai kutonga.”, Zvamazvirokwazvo kokutonga.
Kana munhu ari kuedza kukubatsira, uye imi mhosva navo yokutonga imi……kutaura zvazviri, muri kutonga pavo. (Uye zvisina mhosva pavo)
chokwadi, munogona kutonga kwangu kana uchida, Ini vangada kururamiswa. (“Correct murudo”) Just musandisiya kutonga kwangu kare kana nechinhu chipi nechipi asi neShoko.
tsitsi • Kukadzi 19, 2014 pa 10:29 ndiri • pindura
Wow. Ichi chaiva chikuru mumhanyi. manjemanje, Ndave ndichiedza kuzviyeuchidza Mateu 7 asi vorudzii vakakanganwa zvazvaireva. Uye tichifanira kubatsira mumwe kunze asi kwete nehasha nezvazvo. Ndinobvumirana zvachose. Zviri kinda kusuruvara nokuona ppl noutsinye kutsoropodza vamwe ppl achiona vakatsoropodza aone yakaputsika. The pokutsoropodza vari pachena kwete vakakwana asi zvinoita sokuti kunyange kuzviziva. Hazvina kuvarwadza. More vanhu vanofanira kurarama Matthew 7. Uye yokupedzisira ndima yakanga chikuru. Vanhu havasi kuenda kuda kufamba nzira apo munhu wose ari pakachengeteka ichimirira vari kumupfira mate pavo.
Simon • Kurume 12, 2014 pa 1:07 pm • pindura
Wow, mashoko anoshamisa. Ndichaita kuverenga zvakawanda kubva mapikicha! ;)
Kubvumbi • Kurume 23, 2014 pa 11:14 ndiri • pindura
Wow!!! Wakafara mumwe munhu pakupedzisira akataurwa ichi!!! Ndakanga ndichitaura nomumwe munhu muhofisi yangu nezvazvo pezvizuva kare!!!! Wonderful Blog!!
Taurai: Jesu Kristu Empire | Pastor-Rapper Trip Lee Talks Achishevedza Youth kuti 'Simuka’ uye Kushumirana Fans pamusoro Personal Level (Video)
Kyle • Chivabvu 8, 2015 pa 9:10 ndiri • pindura
saka heino mubvunzo kwamuri. nokuti kare mashoma apfuura Ndave kushanda kwete jugding munhu kuti chinhu. somunhu muropa wose akanyatsorevesa munyika jugdes iwe uye izvi zvinoreva kuti vanhu ava ikozvino zvimwe kuziva zvose pamusoro pako. kunyange chii mafungiro ako kana chii gonna wenyu kana kunyange sei uchazvibata kana vangakuudza manzwiro aunoita pamusoro chinhu. Ini here dont kuwana sei vanhu vanogona kuita izvi. ayo chaizvoizvo zvakaipa. ndauya kuwana pane vanhu kunze uko vakawanda zvokuti vanondivenga, uye havana kunyange akasangana neni. theres hapana nzira kudzora chii zvabuda kupinda musoro yedu. kwepfungwa chaivapo jugdment zvinogona kushandiswa yokugadzirira pachako yezvinhu munofunga kuti occure chikonzero chii Waona pamusoro munhu. asi kana iwe chete kuteerera wakanaka uye vangadzidza pazvinhu zvishoma zvinoratidza chokwadi nezvomumwe munhu ndechokuti vachiri jugding? uye ipapo theres mubvunzo pamusoro kubvuma. nokure nzira yakaipisisa jugde mumwe. Ini dont kundoitora. kunyange zvazvo iwe chete akaudza munhu uyu kuti iwe dont kuvimba kuti aite zvimwe basa nokuti (Kazhinji hapana chikonzero) IMWEWO teverei Ndiko chaizvo Ndinonzwa uye ndizvo NDINOZIVA muchaita. Chokwadi kana munhu uyu rave richizivikanwa akundikane, Nhoroondo anogona uye kudzokorora, asi kuudza munhu zvavanonzwa, funga, kana kuti pane kuenda kuita ndiko bullshit. ayo nyonyova bofu jugdment. uye kana kuti munhu zvino vanonzwa encompetant uye wont kunyange edza, kana mumwe munhu akaita seni, vachava guentee kuratidza kuti munhu chakaipa kuti havazombofi kuti zvakare. asi kunyange zvazvo iwe uratidze nguva nenguva zvakare. chete zvekungofungira. pfungwa? ndingapinda pazuva rose.
Taurai: Trip Lee - Mwari chete ndivo vanganditonga? - SOG- Varanda Grace
Taurai: Mwari chete ndivo vanganditonga… | Achinyemwerera By Faith